JAGIREDAI: March 2017
तपाईको यो साता चैत्र १८ गतेदेखि २४ गतेसम्मको राशिफल
साताका सुरुका दिनहरूमा दोधारे मनस्थिति भए पनि कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा सिर्जना हुनेछैन । बुधबारदेखि काममा गति आउनुका साथै साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । स–साना कुराले पनि पारिवारमा खटपट उत्पन्न गर्न सक्छ । रात्रिको यात्रामा सावधानी अपनाउनुहोला।
आम्दानी तथा खर्च बराबर हुनाले बचत हुने सम्भावना कम छ । सहयोगी मित्रहरू फेला पर्नुका साथै सभा–सम्मेलनमा उपस्थिति हुने अवसर हात पर्ला । बौद्धिक क्षेत्रमा आफ्नो कार्यको परिचर्चा हुन सक्छ । खानपिनमा सजगता अपनाउनुहोला । सवारी साधन चलाउँदा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ ।
पदोन्नतिको सम्भावना छ । घर–जग्गा तथा अचल सम्पत्ति जोडिने योग देखिन्छ । आफूले गरेको निर्णयले अधुरा कार्यलाई सहजै सम्पन्न गर्न सघाउन पुर्‍याउनेछ । प्रियजनसँग यात्रा गर्दा मन खोलेर भलाकुसारी गरिनेछ । साताको अन्त्यमा धन अभाव हुनसक्छ ।
बोलीको प्रभावले सबैको मन छुँदासमेत आलोचनाको सामना गर्नुपर्नेछ । मंगलबारपछि भाग्यले साथ दिनुका साथै नसोचेको कार्यमा प्रगति हुनेछ । पूण्य कार्यप्रति आकर्षित भइनेछ । साताको अन्त्यमा मान–सम्मान प्राप्त हुने देखिन्छ ।
व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथै धन सञ्चित गर्न सकिनेछ । प्रेमी–प्रेमिकाको इच्छामुताबिक नयाँ स्थानको यात्रा तय हुनेछ । आर्थिक कारोबारमा झन्झट आइलाग्न सक्छ । तैपनि आम्दानीका बाटोहरू रोकिने छैन । स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिनुहोला ।
आत्मविश्वास वृद्धि भै मन प्रसन्न रहनेछ । व्यवसायिक सफलताका कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । पूण्य कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफन्तहरूसँगको सम्बन्धमा खटपट देखिन सक्छ । साताको अन्त्यमा भोज–भतेरमा सरिक हुदाँ सञ्चित धनमाल गुम्न सक्छ ।
तपाईंको कामको मूल्यांकन हुनुका साथै आकस्मिक धन लाभ हुन सक्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले मनमा नैराश्यता सिर्जना गर्नेछ । साताको अन्त्यमा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भने बोलीको प्रभावका कारण महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछन् । सेयर कारोबारमा आकर्षित भइनेछ ।
सफलताका लागि कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । अध्ययनमा बाधा सिर्जना हुनुका साथै तपाईंको भनाइको आलोचना हुन सक्छ । चोटपटक लाग्ने सम्भावना पनि टरिसकेको छैन । पश्चिमतर्फको यात्रा फलिफाप हुनेछ । आफ्नो एकल निर्णयका आधारमा गरिएका काममा सफलता प्राप्त होला ।
आलोचना गर्नेहरू सक्रिय भए पनि काममा सफलता हात पर्नुका साथै सबैले प्रशंसासमेत गर्नेछन् । प्रेम जीवनमा खटपट सिर्जना हुनसक्छ । आफन्तहरूसँगको सहकार्यमा धनलाभ गर्ने अवसर जुट्नेछ । विलासी खानपानले स्वास्थ्यमा गडबडी ल्याउन सक्छ । घरायसी व्यवहारमा नफस्नुमै भलो छ ।
आफ्नै पराक्रमद्वारा काम सम्पन्न हुनेछन् । मन प्रसन्न रहनेछ । पर्याप्त विचार नपुर्‍याई गरिएका निर्णयमा विवादको सामना गर्नुपर्ला । आम्दानीका मार्गहरू पहिल्याउन सकिनेछ । पूर्वतर्फको यात्रा गर्ने साइत जुर्नेछ । साताको अन्त्यमा पुराना मित्रसँग मनोरञ्जनपूर्ण भेटघाट हुनेछ ।
प्रियजनको सहयोगमा वैदेशिक यात्रा हुनसक्छ । पराक्रमको प्रशंसा हुनुका साथै सबैले आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्नेछन् । प्रेमी–प्रेमिकाबीच विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । साताको अन्त्यमा बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुनेछ । सुनौलो रंग प्रेरणादायक साबित होला ।
साताको प्रारम्भमै अनपेक्षित कार्यमा खर्च बढ्नाले मन खिन्न हुनेछ । मंगलबारपछि विवादको सामना गरे पनि निर्णय आफ्नै पक्षमा होला । कर्मचारी वर्गले कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ । खानपानका क्रममा स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला ।
Jobs in Graffitti SP. Poland
Job in Europe Poland Graffitti Sp.Z.O.O company
Chicken Packing (25) €550.00
Kitchen Worker (25) €550.00
Peace Nepal Overseas
Gold & Silver Price for 29 March 2017
Gold & Silver Price in Nepal on 29 March 2017
Price of Gold & Silver in Nepal Price of Gold & Silver in Nepal
Price of Gold & silver in Nepal Price of Gold & silver in Nepal Price of Gold & silver in Nepal Price of Gold & silver in Nepal Price of Gold & silver in Nepal
Jobs in Catering Company in Qatar
Job Opportunity in Shaqab Abela Catering Services,Doha Qatar.
Satyam International Services Ltd
Labels: BaideshikRojgar, Qatar
तपाईको यो साता फागुन २७ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्मको राशिफल
सम्झनालायक कार्य सम्पन्न गर्न ठूलाबडाको सहयोग तथा आशीर्वादको आवश्यकता पर्नेछ । करियर बनाउन दैनिकीमा परिवर्तनको खाँचो छ । नौलो रोजगारीको समाचार सुनेर प्रेमिका दंग पर्नेछिन् । साताको अन्त्यमा सवारी साधन खरिद गर्न आकर्षित भइनेछ ।
सफलता हात पार्न केही दौडधूप गर्नुपर्ने हुन्छ । हठ गर्ने प्रवृत्तिले पारिवारिक सम्बन्धमा खिचलो उत्पन्न गराउन सक्छ । हूलमूलमा आफ्ना सरसामान जोगाउने चेष्टा गर्नुहोला । अधिकार एवं प्रतिष्ठा जोगाउन गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्नेछ । साताको अन्त्यमा आर्थिक संकट सिर्जना हुन सक्छ ।
ठूलाबडाको सुझाव अनुसरण गर्दा व्यक्तिगत इच्छा एवं रहरहरू पूरा हुनेछन् । आकस्मिक रूपमा प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्छ, निर्णय गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुहोला । सोचेजस्तै रोजगारी हात पर्न सक्छ । साताको अन्त्यमा पारिवारिक जमघटमा रमाउँदा खर्चले पिरोल्न सक्छ ।
विश्वासपात्रलाई आर्थिक सहयोगको वचन दिँदा संयम अपनाउनुहोला । अन्योलका बीच उन्नतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । होसियारीपूर्वक गरिएका कार्यबाट पर्याप्त धन आर्जन गर्न सकिनेछ । रोजगारीका नौला अवसर प्राप्त हुनेछन् । इँटा रंगको पहिरनले परिणामनजिक पुग्न मद्दत गर्नेछ ।
लोचना गर्नेहरू प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् । दृढतापूर्वक आफ्नो कुरामा अडिग रहे पराजयको सामना गर्नुपर्ने छैन । स–साना त्रुटिले मर्यादामा आँच पुर्‍याउन सक्छ, कार्य सम्पादन गर्दा विशेष होसियारी अपनाउनुहोला । सुनौलो रंगको प्रयोग फलदायी हुनेछ ।
नशा एवं हड्डीसम्बन्धी समस्याले कमजोरी तथा आलस्यता महसुस गराउन सक्छ । नौलो स्थानको यात्रामा मन मिल्ने साथीहरूले थप खर्च गराउनेछन् । विभिन्न सभा–सेमिनार तथा प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर जुट्नेछ । साताको अन्त्यमा पारिवारिक खिचलोले सताउन सक्छ ।
बोलीमा थप प्रभाव पार्न सेतो रंग हितकर हुनेछ । स्वदेशमै नयाँ अवसर हात लाग्ने सम्भावना छ । सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका आइलाग्न सक्छ । मनोरञ्जनमा सहभागी हँुदा चिसोको ख्याल राख्नुहोला । यात्रामा दुविधा उत्पन्न हुने देखिन्छ । घरायसी व्यवहारबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ ।
सानो लगानीबाटै राम्रो मुनाफा हुनेछ । रातो रंगको प्रभावले काममा सफलता दिलाउनेछ । अध्ययनको क्षेत्रमा ठूला अवसर पहिल्याउन सहज हुनेछ । विदेशयात्राको सपना पूरा हुनेछ । साताको अन्त्यमा नौला मित्रहरूसँग परिचित हुने अवसर जुट्नेछ ।
विगतमा गरिएका कार्यले थोरबहुत झन्झट आइलाग्न सक्छ । विदेशयात्राका लागि आवश्यक तयारी अपुरो हुन सक्छ, सचेत अपनाउनुहोला । आधुनिक मनोरञ्जनका सामग्री प्रयोग गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्नेछ । सवारी साधन चलाउँदा संयम आवश्यक छ ।
परिणाममुखी कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुन सक्छ । विपरीतलिंगीसँगको खटपटमा मल्हम लगाउन नयाँ रणनीतिको आवश्यकता छ । भ्रमण तथा मनोरञ्जनका क्रममा तनाव हलुका हुनेछ । साताको अन्त्यमा आर्थिक समस्या वृद्धि हुन सक्छ ।
आफ्ना सिर्जनशील रचनाले प्रेमिकाको मन जित्न सकिनेछ । इष्ट मित्रबाट प्राप्त सुझावले भलाइ गर्नेछ । पुरुषार्थद्वारा गरिएका सेवाले उचाइमा पुर्‍याउनेछ । नीलो पहिरनले कार्य क्षेत्रमा विशेष लाभ दिलाउनेछ । राति अबेरसम्म बाहिर नबस्नुहोला ।
सभा–सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर जुट्नुका साथै नयाँ ज्ञानसमेत आर्जन हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै सार्थक परिणाम हात पार्न सकिनेछ । भित्रभित्रै मन पराउने मुख खोल्न सकेका छैनन् । हतारको निर्णयमा पछुताउनुपर्ला । टाढा भएका मित्रले दिएको सुझावले फाइदै पुर्‍याउनेछ ।
Labels: Horoscope, Rashifal, Weekly
तपाईको यो साता फागुन २० गतेदेखि फागुन २६ गतेसम्मको राशिफल
प्रेमिकाको घुम्न जाने प्रस्ताव स्वीकार गर्दा अविस्मरणीय क्षण बिताउन पाइनेछ । सामान्य वादविवाद परे पनि तपार्इंको सिर्जनाशील कार्यलाई सबैले सर्मथन गर्नेछन् । खानपान तथा मनोरञ्जनमा सहभागी हुँदा संयमित रहनुहोला । स्वास्थ्यमा पर्याप्त ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
रचनात्मक कार्य गरी हितैषीहरूको मन जित्न सकिनेछ । अध्ययनको सिलसिलामा विदेशयात्राको अवसर जुर्न सक्छ । मनले नसोचेका स्थानको भ्रमण गर्दै स्वादिष्ट परिकारको आनन्द लिन पाइनेछ । मनोरञ्जनमा रमाउने समय छ । साताको अन्त्यमा खर्च वृद्धि भै ऋणको चपेटामा पर्न सकिन्छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको कार्य आकस्मिक रूपमा समाधान हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्ने अवसरसमेत प्राप्त होला । साता मनोरञ्जन, भेटघाट तथा भ्रमणमा व्यतीत हुनेछ । प्रेमिकाले विभिन्न कुराको चाहना राख्न सक्छिन् । सवारी साधन चलाउँदा संयम अपनाउनुपर्नेछ ।
आफूभित्रको भय उत्साहमा परिवर्तन भै समाजसेवातर्फ आकर्षित भइनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका काम सम्पन्न हुनेछन् । प्रतिस्पर्धामा इनाम वा सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुनेछ । सेतो रंगको रचनात्मक प्रयोगले लाभ पुर्‍याउनेछ । सवारी चलाउँदा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
रोकिएको अध्ययनले निरन्तरता पाउनेछ । मेहनत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । सरोकार नभएका विषयमा चासो राख्दा दु:ख पाइनेछ । धन अभावको स्थिति यथावत् रहनेछ । साताको अन्त्यमा फजुल खर्चले सताउन सक्छ । चियोचर्चा गर्नेहरूबाट सावधान रहनुहोला ।
योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नाले पछि परिनेछ । सिर्जनात्मक कामले धैरेको मन जित्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धाको दौडमा सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् । विदेशयात्राको योग छ । भ्रमण तथा खानपानमा राम्रै धन खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ । साताको अन्त्यमा मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला ।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित भै आकस्मिक लाभ प्राप्त हुनेछ । आर्थिक भार बढ्नाले सोमबारपछि धनको अभाव महसुस होला । टाउको तथा आँखासम्बन्धी समस्या सिर्जना हुनसक्छ । साताको अन्त्यमा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारीका लागि दौडधूप गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अभिभावकहरूसँग मतभेद उत्पन्न भै आफूप्रति गुनासो बढ्न सक्छ । यात्रा हुने सम्भावना छ । ध्यान पुर्‍याएर गरिएका कार्य लाभदायक रहनेछन् । धैर्य धारण गर्दै परिपक्व निर्णय गरे राम्रै परिणाम हात लाग्नेछ ।
रोकिएको अध्ययन प्रक्रियाले परिणाम प्राप्त गर्ने हुँदा हर्षित भइनेछ । मन पराउने मानिसले दिएको सुझाव अनुसरण गर्दा समय बचत हुन सक्छ । भ्रमण गर्दा बढी खर्च भै व्यवहारिक झमेला आइलाग्न सक्छ । घरायसी व्यवहारमा विशेष होस पुर्‍याउनुपर्नेछ ।
प्रयासलाई निरन्तरता दिन सके अवसर हातबाट फुत्कनेछैन । सामाजिक कार्यमा अपजस आइलाग्न सक्छ । बोलीको मधुरताले बिग्रिएको कामलाई पुन: उचाइमा पुर्‍याउनेछ । राति अबेरसम्म यात्रा गर्दा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला । साताको अन्त्यमा सवारी साधन खरिद गर्न उत्सुक भइनेछ ।
आफ्नो कार्यदक्षताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ । चुरो कुरा पत्ता लगाई असहज परिस्थतिको सामना गर्न सकिनेछ । लगनशीलताले विविध अवसर जुटाउनेछ । मन मिल्ने साथीको सुझावमा विश्वास गर्दा पछि परिएला । अवसरलाई निरन्तरता दिन सके भविष्यको चिन्ता सहजै निर्मूल हुनेछ ।
समस्या समाधानमा पारिवारिक सहयोग जुट्नेछ । विपन्न आर्थिक समुदायमाझ सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सकिनेछ । उपहारका साथ भेट्न आउनेहरूसँग सावधान रहनुहोला । बोलीमा थप प्रभाव पार्न पहेंलो रंग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तपाईको यो साता चैत्र १८ गतेदेखि २४ गतेसम्मको राशि...
तपाईको यो साता फागुन २७ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्मको रा...
तपाईको यो साता फागुन २० गतेदेखि फागुन २६ गतेसम्मको...